Imifanekiso yokubonisa umbongo yomfoti uChema Madoz | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imifanekiso yeenkondlo kaChema Madoz
Ifoto yombongo yokufota umfoti uChema Madoz isixelela amabali abonwayo ngezinto kunye nokusetyenziswa kwayo okunokusibonisa Amazwe afanayo apho izinto zahlukile kodwa ziyafana, into eyahlukileyo kodwa inxulumene nezinye izinto ezifanayo.
Uthathelwa ingqalelo njengawehayi kubafoti abaphambili beli xesha, umfoti waseMadrid usibonisa Umbongo omnyama nomhlophe apho izinto zikhona amabali afihlakeleyo. Fumanisa i inyani efanayo ngaphandle kwesidingo sokutshintsha indalo iphela, fumana ilizwe laseMozzo.
Chema Madoz ngumfoti othathelwa ingqalelo njenge Imbongi ebonakalayo esibonisa inyani eyahlukileyo apho izinto aziyiyo le nto zibonakala ziyiyoIzinto ezilula ezidityanisiweyo kunye nezilungisiweyo zisibonisa into engekhoyo kodwa ukuba, ukuba sinomdla, isibonisa ubuqili bomfanekiso.
Kulo mfanekiso UMozzo uyasibonisa Ibali elibonakalayo elijolise kuyo ukubanjwa komzuzu ngqo, ilifu elifakwe ngalo mzuzu elenza umzobo womthi. Ukusuka kwindawo yokujonga imifanekiso, ukuba sigxila kulwimi lweplastiki lokufota kunye noko ikubonisayo, siyaqonda ukuba kanjani Obo budlelwane phakathi kwezinto zombini sele bukhona Ngaphambi kwesi sithombe, ekuphela kwento etshintsha lelona xesha kanye nembono yefoto. Lo mfanekiso uyamangalisa kwaye unomdla kuba uMadoz wawuthatha ngefestile, walinda okona mzuzu wathabatha ifoto kanye xa ilifu ladlula phambi komthi.
Ixesha ledinga elingagqibekanga Incoko kaMadoz ebonakalayo yenziwa ngendlela ye-analog. Ngokuthandana nexesha elidlulileyo kunye nokutya okumnandi okunikezelwa ziindlela zangaphambili zokufota i-analog, Isixelela amabali usebenzisa izinto eziguqulweyo ngesandla ngaphandle kwesidingo seendlela zedijithali.
La ubuqili yeglasi kwindawo ethile inokuxela inyani eyahlukileyo emfanekisweni apho iziphumo zifezekisiwe Ubuqhetseba phantse bube yinkanuko kodwa intekenteke kakhulu. Amabali amnyama namhlophe Oko ngaphakathi bathetha umlingo kunye nomfanekiso-ngqondweni ophawula umgama othile ngokwenyani, usisa kwindawo eyahlukileyo apho imifanekiso yimibongo emsulwa.
Apha sinokubona iigrafu ezifuna ukungena kwindalo yonke yeMozz ngendlela ye irhafu emsebenzini wakhe.
Unokulandela umsebenzi wakhe kwiinethiwekhi zakhe eziphambili:
Uxwebhu malunga neChema Madoz
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Imifanekiso yeenkondlo kaChema Madoz
Izixhobo ze-5 zoyilo ezinomxholo obonakalayo omkhulu